1173 पटक पढिएको
धरान । हामीले बराहक्षेत्र नगरपालिकालाई पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न उद्योगी व्यवसायलाई उकास्ने काम गरेका छौं । त्यसको परिणाम आज देख्न सक्नु हुनेछ , पानी बोट सन्चालनमा ल्यायौं,सप्तकोशी नदीमा । यो एउटा यस क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपुर्ण काम हो ।प्राधीन हरिद्धार, कोशिकी, नेपालकै सवैभन्दा ठुलो सप्तकोशी नदी छ । तर आज धरानमा वस्छन्, दिशा वराहक्षेत्रमा आएर गर्छन, इटहरीमा वस्छन् फोहोर यहाँ गर्छन ।
हामीले कुम्भ मेला लगायौं , वाहिरबाट आउने कि त धरान जानु पर्यो , इटहरी तर यहाँ मनोरन्जन गर्न पाउँदैनन् । हामीले सुर्यकुण्ड जाने वाटो वनाएको छौं ।
सरकारद्धारा सधै उपेक्षा
वराहक्षेत्रलाई वेवास्ता गरियो । सरकारले मन्दिरको भेटी , पुजारी नियुतिm गर्ने अधिकार हामीलाई दिएको छेैन । यो सव संघीय सरकारको हातमा चावी छ । एउटा वोट चलाउनको लागि संघीय सरकारले रोकिदिन्छ । त्यसैले हामीले वारम्बार माग्दाखेरी हामीलाई दिएको छैन । हामीले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न सरिहेका छैनौं । कारण भनेको अधिकार हामीलाई छैन। वर्षौदेखि केही सिमित व्यतिmहरुले लाभ लिइरहेका छैन् । अनि फोहोर मैला,सुरक्षा गर्नु पर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो कस्तो नियम हो यो ? त्यसैले वराहक्षेत्र मन्दिरको डण्डा अर्केैसँग छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्छ अनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर यसको प्रवद्र्धन, विकास र संरक्षण गर्न सक्नु पर्छ । बराहक्षेत्र मन्दिरको भेटी कति हो ,पारदर्शिता हुनु पर्छ । थुप्रो भेटी उठ्छ भन्छन् । त्यो भेटि राष्ट्रिय ढिकुटीमा जम्मा हुनु पर्छ । त्यहाँको पुजारीलाई तलव राज्यले नै तोक्नु पर्छ । अनि मात्रै मन्दिरको विकास हुन्छ ।
श्रीलंका टापु विवाद के हो ?
: – सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिकालमा पर्ने श्रीलंका टापु उदयपुरको वेलका नगरपालिकाले दावी गर्दा त्यहाँवसोवास गर्ने श्रीलंकाटापुवासीलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका वडा नं ६ र ९ बस्तिहरु रहेको छ । सो बस्तिमा करिब ५ सय घरपरिवारको १३ हजार भन्दा बढि जनसंख्या रहेको छ । उदयपुर जिल्लाको भु–भागले छुने श्रीलंका टापुलाई दुवैतिरको स्थानीय तहले तानातान गर्दा त्यहाँ वसोवास गर्ने श्रीलंकाटापु वासीको जनजीवन अन्यौल वन्दै गएको छ । चारैतिर सप्तकोशीे नदीले घेरेको ,छुट्टै वस्ती झैं देखिने श्रीलंका टापू सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको भु–भागले छुन्छ । श्रीलंका टापुलाई पूर्व तर्फ मूल कोशी नदी छ भने उत्तर, पश्चिम र दक्षिणतर्फबाट कोशीकै सहायक भङ्गालोहरुले घेरिएको छ ।तर यहाँ वसोवास गर्ने श्रीलंकावासी आफैं अन्यौलमा छन् ।जन– निर्वाचित नेतृत्व आएपछि श्रीलंका टापुलाई ताना तान गर्न थालेपछि त्यहाँ वसोवास गर्नेहरु अन्यौलमा परेका हुन् । मेयर खनाल भन्छन्ः–बराहक्षेत्र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार पर्ने श्रीलंका टापु हो । हाम्रो आधार प्रमाणले पनि श्रीलंका टापु हाम्रो हो । हामीले डाटा पनि संकलन गरेका छौ । सुनसरीबाट नागरिकता लिएको,वसोवास र कताको भोटर हुन यो सवै कुराले श्रीलंका टापु हाम्रै हो । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु यहीँका वासिन्दा हुन् ।
विवाद किन त ? वेलका पनि दावी गरेको छ ?
: – कस्को हो भन्ने विवाद होइन,तर यहाँले हाम्रो भन्नु भएको छ । हामीले तपाईको होइन हाम्रो हो भनेको छौ ।प्रदेश सरकारले कुन पालिकाको हो भनेर हचुवाको भरमा वजेट दियो । आधार प्रमाणको आधारमा भन्ने हो भने २०२४ सालदेखि नागरिकता जारी भएको ९० प्रतिशत जनताहरु छन् । हामीसँग डाटा प्रमाण छ । आधार प्रमाणको आधारमा हर्ने हो भने के खोलो कुद्ने वितिकै , वारी पारी हुने वितिकै तपाईको गोत्रा छुटिन्छ त ?
त्यसैले स्पोटमा गएर हिजोको वुढापाका र पुराना जनप्रतिनिधीसँग वझु्दा प्रमाणै प्रमाण छ । अलिकति वेलका नगरपालिकाको मेयरले एग्रेसिप भएर, प्रभावित पारेर हाम्रो भुमि भन्न खोजिएको मात्रै हो , हामी प्रमाण सहित छौ उहाँहरुसँग के प्रमाण छ ?
पुर्वाधार विकासमा गरेको प्रयास
हामीले निर्वाचित भएर आएपछि टोल, वडा र स्थानीय तहलाई जोड्ने काम गरेका छोैं । कच्चीबाटो र पक्की सडक बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं । हामीले नगरभित्र उच्च स्तरीय सडक बनाएका छौं ।सडक विस्तारलाई हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।